Star Power 1990-99: Madhuri sida ay kaalinta 1-aad awood ku gashay iyo atirishooyinkii kusoo xigeen – Filimside.net
Star Power 1990-99: Madhuri sida ay kaalinta 1-aad awood ku gashay iyo atirishooyinkii kusoo xigeen
August 6, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: August 6, 2018
Waxaan soo idleenay maqaalkeenii aan kaga hadleenay Star Power-ka ama awooda atirishooyinka intii u dhaxeesay 1990 ilaa 1999.
10-kaas sano si wacan ayaan kaga sheekeenay anagoo sanad walbo si gaar ah usoo qaadaneenay sedexda atirisho ee hogaanka u hayeen iyo atirishooyinka xidignimada sanado kala duwan helayaan ama awooda kusoo biirayeen qaar kalena awoodooda dhacday.
Sidaa darteed waxaan ku xireynaa Star Power-kii ama awooda atirishooyinka Bollywood-ka inaan atirisho walbo isugu darno dhibcaha ay sanad walbo heleesay iyo dhibcaha guud ee heshay 10-kaas sano (1990-1999):
1. Madhuri Dixit (1990-1999): shan sano oo isku xigto ayay kaalinta kowaad ku dhameesatay hogaanka atirishooyinka intii u dhaxeesay 1991 ilaa 1995 waxayna dhibcaha guud heesatay awood ahaan 7,550-dhibcood.
2. Karisma Kapoor (1991-1999): 9-sano ay fanka ku jirtay 90-maadkii 7-sano oo ka mid ah ayay awood laheyd waxayna hogaanka u heesay afar sano oo xariir ah 1996 ilaa 1999 waxayna dhibcaha guud heesatay awood ahaan 6,500-dhibcood.
3. Kajol (1991-1993): 9-sano ay fanka ku jirtay 90-maadkii 7-sano oo ka mid ah ayay awood laheyd waxayna heshay dhibcaha guud 6,000-dhibcood.
4. Juhi Chawla (1990-1999): sanadii 1992 ayay xidig weyn noqotay wixii markaas ka dambeeya safka hore lagama weyn jirin waxayna waxayna heshay dhibcaha guud 5,00-dhibcood.
5. Raveena Tandon (1991-1999): sanadii 1994 ayay xidig weyn noqotay waxayna dhibcaha guud heshay 3000-dhibcood.
6. Rani Mukerji (1997-1999): labadii sano ugu dambeesay 90-maadkii ayay fanka aqoonsi weyn ku yeelatay waxayna dhibcaha guud heesatay 1055-dhibcood.
7. Aishwarya Rai Bachchan (1997-1999): sanadkii ugu dambeeyay 90-maadkii ayay aqoonsi weyn heshay waxayna heesatay 550-dhibcood markii 90-maadkii dhamaaday.
8. Preity Zinta (1998-1999): labadii sano ugu dambeesay 90-maadkii ayay aqoonsi wacan heshay waxayna heesatay 520-dhibcood.
Madhuri Dixit awood taariikhi ah ayay fanka Hindiya ku qabsatay 90-maadkii weliba shantii sano ugu horeesay (1990 ilaa 1995) awoodeeda looma dhawaan karin sida guud 10-kaas sano Madhuri ayaa iska leh.
Karishma Kapoor iyadana 90-maadkii afartii sano ee dambo ayay hogaanka u qabatay weliba qarnigii 21-aad waxaa la galay Karisma oo Bollywood-ka dhanka atirishooyinka hogaanka u heesay.
Kajol iyadana dadaalkeeda mid aad u sareeyay ayuu ahaa waxayna cagta cagta u saareesay Karisma madaama sedexdii sano ugu dambeesay 90-maadkii labadan atirisho dhibco ahaan aad isaga ag dhawaadeen.
Juhi Chawla calankeedii wuu dhacay weliba 90-maadkii sedexii sano ugu dambeesay si tartiib ah ayay awoodeedii u lumineesay.
Sridevi 90-maadkii oo dhan labadii sano ugu horeesay ayay awood laheyd kadibna calankeedii wu dhacay marka xisaabta laguma dari karo madaama awoodeedii 80-maadkii ahayd.
Rani, Aishwarya iyo Preity ayaa madaxa lasoo kaceen labadii sano ugu dambeesay 90-maadkii taasi oo caddeyn u ahayd qarnigan cusub markii la guda galay in sedexdan atirisho hogaanka fanka isku qabsadeen.
Fahan Yar 5-atirisho ee awooda isugu soo hareen dhamaadkii 90-maadkii iyo mid walbo aflaanta HIT-ka Ugu Weyn Heesatay:
Madaama Karisma iyo Kajol hogaanka fanka hayeen dhamaadkii 90-maadkii waxaa madaxa lasoo kaceen Rani, Aishwarya iyo Preity, bal aan isla fiirino dhamaadkii 1999 iyo shantaan atirisho mid walbo aflaanta Hit-ka ugu weyn u noqdeen ee xiligaas u diiwaan gashnaayeen:
Karishma Kapoor aflaanta Biggest Hits u noqdeen ee u diiwaan gashnaayeen Raja Hindustani, Dil To Pagal Hai, Hum Saath Saath Hain, Biwi No.1, Hero No. 1.
Kajol aflaanta Biggest Hits u noqdeen ee u diiwaan gashnaayeen Dilwale Dulhania Le Jayenge, Kuch Kuch Hota Hai, Karan Arjun, Ishq, Pyaar To Hona Hi Tha.
Rani Mukerji aflaanta Biggest Hits u noqdeen ee u diiwaan gashnaayeen Kuch Kuch Hota Hai, Ghulam.
Aishwarya Rai aflaanta Biggest Hits u noqdeen ee u diiwaan gashnaayeen Hum Dil De Chuke Sanam, Taal
Preity Zintaaflaanta Biggest Hits u noqdeen ee u diiwaan gashnaayeen Soldier
F.G: Kajol iyo Karisma waxay heesteen aflaan badan oo HIT u noqdeen 90-maadkii balse waxaa loo soo xulay 5-filim ee HITS ugu weyn u noqdeen.
Saaxiibayaal Dhamaan Waad Ku Mahan Santihiin Sida Aad Noola Fal Gashiin Marwalbo, Insha Allah Waxaan Bilaabi Doonaa Star Power-ka Bollywood-ka Sida Uu Ahaa Bilawgii Qarnigaan (2000-2009) Awooda Atirishooyinka Loolanka Wajiga Uu Yeeshay Karisma, Kajol, Rani, Aish iyo Preity Yaa Awooda La Wareegay La Socod Wacan…
Haddii Aadan Aqrisanin Sedexdii Atirisho Ugu Awooda Badneyd 1999 Fadlan RIIX HALKAAN
Waxaa Aqrisay 535
aad baad umahadsantahay zakarie
Adiga mudan walaasheen
Aaway.manisha koirala waa.atariisho.filimo badan.hit.super hit.blackbuster.keentay
Manisha atirisho fiican oo jiliin wacan wey ahayd laakiin xidig Boxoffice awood ku lah ma ahayn oo aflaan Big Hits ah sameesay 90 maadkii.